ဆွဲကြိုးများ Archives - Dynasty Gold And Jewellery
Selectacategory Accessories Alphabet Blessings & Culture Chain Charms Cute & Pets Fate & Myth Laser Tattoo Love Moments Pendant Chain Perfect HardGold က‌လေးဝတ်လက်ဝတ်ရတနာများ ဆွဲကြိုးများ ဆွဲသီးများ နားကပ်များ ပစ္စည်းအသစ်များ ပလက်တီနမ်လက်ဝတ်ရတနာများ ဖီချူး လက်ကောက်များ လက်စွပ်များ လက်ထပ်လက်စွပ်များ ဟန်းချိန်း နှင့် ခြေကျင်းများ အခြားလက်ဝတ်ရတနာများ အမျိုးသားဝတ် လက်ဝတ်ရတနာများ
အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး color သွင်းနည်းပညာဖြင့်ဖန်တီးထားသော တောက်ပလွန်းလှစိန်တပွင့် ဆွဲသီးပါကြိုး……..
24K (16ပဲရည်) 999 ရွှေရည်အပြည့် ရွှေအစစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ Metal : 24K Color : Yellow Gold Length : 41cm ရွှေထည်များ ပြန်လဲ လိုပါက ရွှေစျေးတွင် စျေးမခွါဘဲ ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းတန်ဖိုးနှင့်ထပ်တူ(သို့) ပိုသော အခြားမည်သည့် ရွှေထည်နှင့် မဆို လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။ (လက်ခ ကျသင့်ငွေတန်ဖိုး ပြန်လည်ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။) ရွှေထည်များ ပြန်ရောင်း လိုပါက ရွှေစျေးတွင် 1g ကို တန်ဖိုး ၁၂၀၀ ကျပ်သာ ခွာပြီး ပြန်လည်သွင်းနိုင်ပါသည်။ (လက်ခ ကျသင့်ငွေတန်ဖိုး ပြန်လည်ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။)
အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး color သွင်းနည်းပညာဖြင့်ဖန်တီးထားသော တောက်ပလွန်းတဲ့ ကြယ်ဆွဲသီးပါကြိုး…….. 24K (16ပဲရည်) 999 ရွှေရည်အပြည့် ရွှေအစစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ Metal : 24K Color : Yellow Gold Length : 41cm ရွှေထည်များ ပြန်လဲ လိုပါက ရွှေစျေးတွင် စျေးမခွါဘဲ ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းတန်ဖိုးနှင့်ထပ်တူ(သို့) ပိုသော အခြားမည်သည့် ရွှေထည်နှင့် မဆို လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။ (လက်ခ ကျသင့်ငွေတန်ဖိုး ပြန်လည်ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။) ရွှေထည်များ ပြန်ရောင်း လိုပါက ရွှေစျေးတွင် 1g ကို တန်ဖိုး ၁၂၀၀ ကျပ်သာ ခွာပြီး ပြန်လည်သွင်းနိုင်ပါသည်။ (လက်ခ ကျသင့်ငွေတန်ဖိုး ပြန်လည်ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။)
ကံကောင်းခြင်းတွေကို အဝေးထွက်မသွားစေဖို့ DYNASTY မှ လက်ရာသပ်ရပ်ပြီး ဒီဇိုင်းဆန်းသော ရွှေသော့လေးနဲ့ ခတ်ထားကြပါစို့…..
Size : 18in (Adjustable)
ရွှေထည်များ ပြန်လဲ လိုပါက ရွှေစျေးတွင် စျေးမခွါဘဲ ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းတန်ဖိုးနှင့်ထပ်တူ(သို့) ပိုသော အခြားမည်သည့် ရွှေထည်နှင့် မဆို လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။
ရွှေထည်များ ပြန်ရောင်း လိုပါက ရွှေစျေးတွင် 1g ကို တန်ဖိုး ၁၂၀၀ ကျပ်သာ ခွာပြီး ပြန်လည်သွင်းနိုင်ပါသည်။
အချစ်တွေကို သေချာသိမ်းထားပေးမဲ့ သော့ဆွဲသီးပါကြိုးလေးပါရှင်……..
Length : 16inch
ကြိုးဒီဇိုင်းနှစ်ခုကို လိုက်ဖက်စွာပေါင်းစပ်ထားသော ဆွဲသီးပါကြိုး ဒီဇိုင်းဆန်း…..
24K (16ပဲရည်) Au 999 ရွှေရည်အပြည့် ရွှေအစစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
Length : 18in (Adjustable)
ရွှေထည်များ ပြန်လဲ လိုပါက ရွှေစျေးတွင် စျေးမခွါဘဲ ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းတန်ဖိုးနှင့်ထပ်တူ(သို့) ပိုသော အခြားမည်သည့် ရွှေထည်နှင့် မဆို လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။ (လက်ခ ကျသင့်ငွေတန်ဖိုး ပြန်လည်ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။) ရွှေထည်များ ပြန်ရောင်း လိုပါက ရွှေစျေးတွင် 1g ကို တန်ဖိုး ၁၂၀၀ ကျပ်သာ ခွာပြီး ပြန်လည်သွင်းနိုင်ပါသည်။ (လက်ခ ကျသင့်ငွေတန်ဖိုး ပြန်လည်ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။)
မြား ✥လေးဆင်းပါ ဆွဲသီးပါကြိုးလေကတော့ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိပါစေ ဦးတည်ရာကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်အပြည့်ရှိတဲ့ ဒီဇီုင်းသပ်ရပ်လွန်းလှတဲ့ ဆွဲသီးပါကြိုးလေးပါ…..
Li Li Channel (V) ရွှေဆွဲသီးပါကြိုး
ရွှေရည် : ၁၅ပဲရည်
အရောင် : ရွှေရောင်
အရှည် : ၁၆ လက်မ
အထည်များ ပြန်လဲ လိုပါက ရွှေစျေးတွင် (၅၀၀၀)ကျပ်သာခွာပြီး၊
အထည်များ ပြန်ရောင်း လိုပါက ရွှေစျေးတွင် (၁၀၀၀၀) ကျပ်သာခွာပြီး ပြန်လဲ၊ရောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
(အလျော့တွက် + လက်ခ ကျသင့်ငွေတန်ဖိုး ပြန်လည်ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။)
LiLi Love ရွှေဆွဲသီးပါကြိုး
အရှည် : ၁၅ လက်မ
LiLi New တော်ဝင်ရွှေဆွဲသီးပါကြိုး
အရှည် : ၁၄.၄ လက်မ
LiLi New တော်ဝင်ရွှေဆွဲသီးပါကြိုး 2Color
အရှည် : ၁၄.၅ လက်မ
Box Chain တော်ဝင်ရွှေစင်ရွှေဆွဲသီးပါကြိုး
Box Chain ဘောလုံးတန်းရွှေဆွဲသီးပါကြိုး